Diplomatic Immunity Secured, Grace & Robert Mugabe Return To Harare – Nigeria Circle News
Diplomatic Immunity Secured, Grace & Robert Mugabe Return To Harare
South African authorities have allowed Zimbabwe’s first lady Grace Mugabe return to Harare, without pressing the charge of assault against her. Grace Mugabe returned to Zimbabwe Sunday morning with President Robert Mugabe, who had attended a regional summit in South Africa. Zimbabwe media confirmed Grace’s arrival in Harare, a week after a 20-year-old model, Gabriella Engels, accused her of assault in an upmarket Johannesburg hotel room.
Photo: Grace Mugabe
The case against Grace Mugabe has been dropped as a political flavor to Robert Mugabe. South Africa’s main opposition party had warned President Jacob Zuma and his administration not to let Grace Mugabe leave. And lawyers working with the model said they will go to court to challenge the South African government if it is confirmed that immunity was granted to Mugabe. Willie Spies, legal representative at AfriForum, an organization that primarily represents South Africa’s white Afrikaner minority, said Grace Mugabe may be back in in Zimbabwe, but the legal actions may make it difficult for her to return to South Africa in the future.